Qayb 3aad: Su,aalaha Dadweynaha in Laga Jawaabo oo la Qanciyo waa Muhiim – Rasaasa News
Jul 11, 2009 Jwxo, Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
Waad Sallaamantihiin, akhyaarta bogga rasaas.com, waxaan idin waydiin lahaa, errayo dhawr ah oo qoraaladiina aad ugu badan sidda; Jwxo, Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo iyo Jwxo-shiilada, waxaa kaliya oo aan hore u aqiinay Jwxo oo ahayd Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [ONLF ama Jwxo], hadaan la badalin, marka maxaad ula jedaan magacyadan, ma kuwo halganka ku soo biiraybaa?
Waxaan idinka codsanayaa in aad ii soo jilcisaan erayada la gaa gaabiyey.
Su,aasha waxaa ka jawaabaya H. Magan
Waan ku sallaamayaa akhristow, waxaan jeclahay in in su,aasha aad na soo weydiisay aan isku dayo in aan kaa qanciyo intii karaan kayga ah.
Waxaan filayaa in aad taqaano Jabahada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] oo aad loogu yaqaano u dagaalanka dhulka Somalida Ogadeeniya. Jwxo, waxaa ay ahayd Jabhad uu dadweynuhu lee yahay oo aad loo jeclaan, aadna ay ugu taamayeen dadka Somalida Ogadeeniya, waxaana marmar xiligii uu Cabdulahi Sacdi noqday madaxweynaha dhulka Somalida Ogadeeniya la soo saaray heeso aad u badan waxaan xusuustaa hees caan ahayd [Jabhadu Jwxo weey jidiinki nolosha weeye Jeraar amaadin weeye janada juqdheh weeye], aan kuu jilciyo akhristow [Jeeraar Amaadin waxaa uu ahaa nin wali ah, wuxuuna ahaa inta la og yahay ninka kaliya ee isaga oo nool Janada loogu balan qaaday.
Jabhada waxaa hogaamiye muddo dheer ka ahaa Sheekh Ibraahin Cabdala oo ahaa nin aad loo jeclaa noloshiisana ku dhamaystay Jabhadnimo iyo sidii uu xoriyad u gaadhsiinlahaa dadweynaha Somlida Ogadeeniya. Sheekh Ibraahin waxaa uu saaxiib lahaa ruux walba oo halganka u saaxiib ah, kiiyoo aan ku riixayn, diin, dhaqan iyo dhalasho midna. Intii uu Sheekh Ibraahin halganka Somalida Ogadeeniya uu madaxda ka ahaa waxaa uu wanaagiisa gaadhsiiyey meelo badan, gaar ahaana waxaa uu halganka saaxiib uga dhigay ummad weynta Somalida Ogadeeniya isaga oo diiday in uu marna halganka ay Jwxo wado uu ku dhex milmo dagaalada sokeeye ee ka socday Somaliya.
Sheekh Ibraahin, ka dib waxaa hogaanka ururka Jwxo, qabtay Maxamed Cumar Cisman oo ahaa taliyihii hore ee ciidankii Bada ee Somaliya [hogaan si khalda ku yimi], ninkan intii uu ahaa taliyaha ciidanka Bada Somaliya, waxaa uu ahaa nin aad uga duwan madaxdii shaqada ku haysatay Somaliya ee asal ahaana ka soo jeeday dhulka Somalida Ogadeeniya. Mr Cisman ma uusan ahayn nin waxtara dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxyeelo mooyee, waxaa uu aad uga fogaan jiray goobaha lagaga hadlayo arimahah qadyada Ogaden, iyo waliba qabiilka Ogadeen.
Mr. Cisman, waxaa uu madax ka noqday Jwxo iyada oo dhisan oo cagaha isku taagtay, oo leh xidhiidho caalami ah, dhaqaale iyo warfaafin dhamaystiran oo kolkii ugu horeyey uu sameeyey Professor Axmed Mukhtaar [Udub la aslay]. Mr. Cismaan waxaa uu bilaabay arimo isga gaar u ah oo ayna jabhadu shaqo ku lahayn, waxaana kolkii ugu horeysay si gaar ah u arkay Professo Udub, oo kolkii uu arkay sidda uu wax u wado la noqday taageeradii uu ururka Jwxo u hayey.
Waxaa in badan la isku dayey Mr Cisman in la tuso nidaamka Jabhadnimo, nasiib daro waa lagu guulaysan waayey, waxaana uu bilaabay nidaam Jajabin ah oo lid ku ah halganka, isaga oo qoondeeyey in uu kaliya adeegsado beeshiisa iyo qaraabadiisa sidda ay noo sheegeen xubno golo dhexe ah oo ay leedahay Jwxo.
Hadaba, waxaa kolkii ugu horeyey yidhi kani waa Jwxo-shiil Maxamed Cabdi Yaasiin [Diirane] bilowgii 2005, Diirane xiligaas waxaa u muuqatay dhibaatada maanta uu lugaha kula jiro Jwxo-shiil iyo burburka halganka Somalida Ogadeeniya ee haatan haysta, waxaan filayaa in Diirane uu yahay xiligan dadka ku jira “afkii baa juuqda gabay jid aan ku baxaanan jirin jihadi baa iga wareertay Jwxo”. Akhristow micnihii oo gaaban Jwxo waad taqaan, shiil waa wax la shiilay waxa uu doonaba ha ahaadee, marka waxaa loola Jeedaa Jabhadii In Cumar wuu shiilay ama wuu baabi,iyey.
Hadaba, ninka la yidhaahdo Jwxo-shiil, kaligii ma aha ruuxa shiilay Jwxo, waxaa jiray dad ku garabtaagnaa xumaan kasta oo uu halganka ku samaynayo, dadkaasi waxay raali ka ahaayeen ficil xun oo kasta oo uu sameeyo. Waxaanan u muuqan dadkaas in Jwxo ay u dhaxayso dadka dhulka degan oo dhan, waxayna moodeen in Jwxo ay tahay “geel reer Cabdile laga soo dhacay” waa sida ay dadka qaarkii yidhaahdaan, waxayna cidla dhigeen calaashaan qabiil halgankii Somalida Ogadeeniya. Dadka noocaas ah waxaa ay ahaayeen dad qabiil ku dabo socda Jwxo-shiil, iyaga laftigooda waxaa loo bixiyey Jwxo-shiilo ama qabiil ku Jabhada [Jwxo].
Waxaa kale oo aad na soo weydiisay Jwxo-shiilada, Waxaa jira dad iyagu aan ahayn dad fikir dheer leh balse kolba waxa ugu dambeeya ee indhahooda ka hor muuqda ayey garashadoodu tahay. Dadkani waxay isugu jiraan dad masuuliyiin ah iyo dad taageerayaal ah, wax umaa loo sheegaa wax talo ah lama weydiiye, wax ay sheegaan oo la maqlaana ma jiraan. Dadkaas wey adag tahay sida ay uga fikiraan wax loo sheegay iyaga laftigoodu qayb ayey ku lee yihiin dhibaatada waayo waxaa la keenaa hoolalka shirarka si ay kuraasta u buuxiyaan, waxaa kale oo laga qaadaa qaaraanka ay Jwxo-shiil iyo Jwxo-shiilo wax ku dumiyaan ee ay ku laayaan N/hurayaalka Jiida hore.
Dadkan waxaa la yidhaahdaa Jwxo-shiilada, waana qayb balaadhan oo bulshada ka mid ah, walina diyaar uma aha in ay su,aal weydiiyaan Jwxo-shiil iyo Jwxo-shiilo midna.
Saddexdan magac waxay masuul ka yihiin burburka halganka Somalida Ogadeeniya, iyaga oo shiilay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], taariikhduna way xusi.
FG. Jwxo-shiil – Maxamed Cumar Cismaan, Jwxo-shiilo – Qabiil ku Jabhad, Jwxo-shiilada – Mayeedhaanka daba socda Jwxo-shiil [kuwa magac Jwxo-shiil shirarka ku qabta].
Waxaan quudaraynayaa akhristow in aad haatan ka bogatay jawaabta su,aashii aad na soo weydiisay, H Magan